Hacking စိတ်ကူး အပိုင်း(၁) နဂါးနီဟက်ကာအဖွဲ့ - Leet Developers
Home Blog Hacking Hacking စိတ်ကူး အပိုင်း(၁) နဂါးနီဟက်ကာအဖွဲ့
By: System Administrator On: Oct 24, 2019 Hacking 107
တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ ၂၀၁၅ လောက်ကတည်းက ကျွန်တော်သဘောကျပီး Save ထားခဲ့မိတဲ့ Post လေးတခု ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကို ခွင့်တောင်းပီး ပြန်တင်ပေးတာပါ။ အာ့တုန်းက ဟက်ကင်းစ ရူးခဲ့တဲ့ အချိန်ကဖတ်ခဲ့မိတာလေး ပြန်ရှဲလ်ပေးပါရစေ။မူရင်းရေးသားသူ WYTU ကိုသားလေးကိုလည်းတင်ခွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကဲစဖတ်ကြည့်ပါတော့ နဂါးနီဟက်ကာ ဂိုဏ်းအကြောင်းလေးကို...
အေး ညီလေး တို့အဖွဲ့မှာ ဘဲ ဆယ်ယောက်ပဲ ရှိတယ် အခြားမြန်မာနိုင်ငံက စစ်ဘက်ဆိုင် ရာ ရုရှပြန် စစ်သည်တွေပေါင်းမှ စုစုပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက်ပေါ့ ဒီထဲမှာ မှ တကယ် အဆင့်မှီမမှီတွေကရှိသေးတယ် လူကလိုနေ တာ... တကယ်လို့များ အခြားနိုင်ငံကတိုက်ခိုက်စမ်းသပ်မှုလုပ်လာ ရင်တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့လို တယ်။ လူအင် အားလို တာပေါ့ ကွာ ဟက် ကာဖြစ်ဖို့ ကလဲ မလွယ်ဖူး ကြိုး စား အားထုတ်မှု ရှိပြန်တော့လဲ နောက် က နေစားဝတ်နေရေးအတွက်ပံ့ ပိုးပေးမယ့်သူလိုတယ်ဒါမှစိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ လေ့လာပြီး ပညာစကေးတွေတတ်လာ မှာ။
ညီငယ်တို့တွေ က ဟက်ကာတွေလေ ဟက်ကာဆိုတာပြစ်မှုကျူးလွန်သူလို့သတ်မှတ်ကြတယ် လူ လုံးထွက်ပြီး သင်တန်းပေးလို့မရဖူး။ ပြီးတော့ ဟက်ကာမှန်းသိတဲ့အခါ ဒီကောင်ဟက်ကာကြီးပဲဆိုပြီး ပညာစမ်းချင်သူ လာ စသူတွေ ကခပ်များများ အပြင်လောကကြီးမှာ ရန်များပါတယ်ညီငယ်။ဖိုရမ်တို့PDF တို့ Video တို့တခုခုလုပ်ပီးတော့ တကယ်သိချင်တတ်ချင်ရင်Training ပေးတာပေါ့။ တကယ်တော့အဲလို သင်ပေးတာလဲ မကောင်းလှဖူး။သူတို့တွေ google ကနေ Self study လုပ်နိုင်ပီးကိုယ့်ဘာသာရလာတဲ့ တန်ဖိုးလေးကိုတန်ဖိုးထားစေချင်တာ။ အကိုတို့သူတို့အားတက်အောင်ပြောပြနိုင်တာလေးတခုကတော့ How to becomeahacker ပေါ့...
တချို့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းဆိုက်တွေဆို ဝင်ပြီးစျေးပြင်ပေးခဲ့လို့ရတဲ့အထိကိုပေါက်နေတာပါ ပဲ ။သတင်းဌာနဆိုက်တွေလဲဒီလိုပဲ လေ။သတင်းအတုတင်ပေးပြီး တင်လိုက်ရင်တောင် နောက်ကနေမနည်းလိုက်ရှင်းရလောက်တယ်။ Developer ကလဲ ပညာရှင်ဆန်ဆန် Professional ပီပီသသကိုယ်လုပ်သွားတာကိုကိုယ်သေချာတာဝန်ယူသင့်တာပါဘဲ။ ငွေမရလို့ ဒီငွေနဲ့အခြားနိုင်ငံမှာဆို မရဖူးတို့ဘာတို့ မလုပ်နိုင်ဖူးတို့ဘာတို့ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ငွေ ၅ရာနဲ့ထမင်း ၀၀ စားလို့ရသေးတယ်ဆိုတာ သိရင်သိကောင်းမှာဘဲ။ အခြားသူတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ ၀မဝ မသိဖူးပေါ့ဗျာ။ဒီကြားထဲစေတနာနဲ့ Security လိုအပ်နေတယ်ဒါလေးပြင်လိုက်နော်ဆိုတာ ကို ပြန်ရန်တွေ့ဆဲဆိုတဲ့သူတွေလဲ ရှိတယ်။အဲတာနဲ မထူးပါဖူး ကိုယ့်ဘာသာတချို့ဟာတွေဝင်ပြင်ပေးခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာ က ကိုယ်ကတခုခုတတ်ပြိးအဲတာနဲ့လုပ်စားနေတတ်ပြီဆိုရင်အခြားသူတွေကိုကိုယ့် လောက်မတတ်ဖူးပဲထင်သွားကြရော။ကိုယ်ကတတ်နေပြီထင်တော့ ထပ်မလေ့လာဖြစ်ကြတော့ဖူး။ ရောင့်ရဲသွားကြတာပေါ့လေ။ပြီးတော့ ကိုယ့်လောက်မတတ်ဖူးကွာဆိုပြီး ဘယ်သူဆီကမှမမေးမမြန်း မေးလိုက်ရင်ငါအောက်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ပေါ့ လေ...
ညီငယ်က အကိုကြီးတော်ပီ ဒါတွေပြောလဲ ဒေါတွေပါမယ်...
ကျနော်တို့မျက်နှာဖုံးတွေဝတ်မယ် Video တခု လုပ်မယ်ဗျာ How to becomeahacker ဆိုပြီး Video လုပ်မယ် ဟမ် လုပ်ပီး ဘာလဲ You tube ကနေ တင်မှာလား မဟုတ်ဖူး အကို ကြီး ဒီ ဖက်ကင်း ယူကျူ့ကနေမတင်ဖူး ဘယ်သကောင့်သားမှ Bill ကုန်ခံပြီး မနှိပ်ဖူး ဒီတော့မိဘပြည်သူများလဲ နဂါးနီကို အာရုံစိုက်လာအောင် MRTV 8 ကနေလွှင့်မယ် အဲလိုင်းက လူတိုင်းကြည့်နေတဲ့လိုင်းပဲ ။ ဟဲ့ကောင် မင်းဟာကအကြံ ကြီးလိုက်လား Nothing is possible ဘရို Let's try together အကိုနံ ပတ် ၅ က EC နဲ့ ကျောင်းပီးတာမလား သူ့ကို TV Brocasting တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမေး ကြမယ်လေ ။အေးအဲကောင် EC နဲ့မလုပ်တော့တာကြာပိ ကွ ဘာလို့လဲ ဆို တော့ကျောင်းမှာ Project လုပ်တာ Hacking to Satellite ကိုလုပ်တာ ဘယ် သူမှအဖက်မလုပ်တဲ့ အပြင် ထိုင်ပါဟားလိုက်ကြသေးတယ် သူစိတ်နာသွားတာအဲထဲ က ဗျာ … အတော်ပဲ လေ ကျနော်တို့ဒါဆို TV အသံလွင့်ရုံလောက်ခေါင်းထဲမထည့်တော့ဖူး အကို ၅ ရဲ့Project ကို အကောင်ထည်ဖေါ်ကြမယ် ။အကို ၅ ဆီဖုန်းခေါ်ပြီး ညနေ ချိန်းလိုက်တော့ အကိုနံပတ်၅ ဆီထံကျန်တဲ့ညီအကိုများရောက်လာကြသည် အကို ကျနော်တို့ MRTV-8 လွင့်ပေးတဲ့ Satellite ကိုကျနော်တို့ဟက်ချင်တယ် ..
line အော်တိုရှာနိုင်လား မင်းရဲ့receiver က ထင်တာဘဲ signal status က 40ဘဲ ရှိတယ်သေချာချိန်ဦး...
“WireShark for DVB” ဒါတော့တော့ Traffic တှကှညေ့မြယလြေ ဟိဟိ...
Satellite တွေ Ground station တွေ ကို DOS တိုက်တာတို့ Spoofလုပ်တာတို့ Direct command ပေးတာတို့ဆို ဒုက္ခ....
Copyright © 2021; Leet Developers. All rights reserved.